Okpomoku Uwa: Uzo nke ikpochapu nke anaghi ahuta n'ime afọ 200 na ọdọ mmiri sub-arctic | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Mgbanwe ihu igwe
Mbelata ọdịda dị n'ụdị snow a hụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya na sub mpaghara arctic Canada emeela ka ndagide na-echegbu onwe ya site na Mpaghara Ọdọ Mmiri.
Nke a bụ nkwubi okwu nke ụfọdụ ndị nyocha sitere na Mahadum Laval, Mahadum Wilfrid Laurier, Mahadum Brock na Mahadum nke Waterloo na nyocha e bipụtara izu ole na ole gara aga na akwụkwọ gọọmentị nke akwụkwọ akụkọ sayensị Geophysical Research Letters. Na-ekpughe otu ihe akaebe ọzọ, ọ bụrụ na ha ezughi oke nke ihe doro anya nke zuru ụwa ọnụ.
Ndị nyocha ahụ kwubiri na nkwubi okwu a mgbe ha mụsịrị ọdọ mmiri 70 n'akụkụ Old Crow, Yukon na Churchill, Manitoba, Canada. Imirikiti ọdọ mmiri ndị a mụtara erughị otu mita. Dika nyocha emere, ihe kariri ọkara nke ọdọ mmiri ndi di na mpaghara di ala ma ndi ohia gbara ya gburugburu, na-egosi ihe omuma nke ikpochapu.
Nsogbu a sitere na mbelata nke mmiri na-abịa site na gbazee. Iji maa atụ, site n’afọ 2010 rue 2012 nkezi mmiri ozuzo oyi na Churchil dara site na 76 mm ma e jiri ya tụnyere nkezi nke edere n’agbata 1971 na 2000. Ihicha nke ọdọ mmiri ụfọdụ, bụ nke anya pụtara n’anya na nke mbụ na 2010, bụ ọbụna karịa ekwuru na 2013.
Maka ụdị ọdọ mmiri ndị a, ọdịda dị n'ụdị snow na-anọchite anya 30% na 50% nke mmiri mmiri kwa afọ. The ụdị ihicha hụrụ site na-eme nnyocha na-ahụtụbeghị na-adịbeghị anya na 200 afọ. Ọzọkwa, nyocha ndị isotopic emere na phytoplankton ka na-agbakọ n'ime akwa ọdọ mmiri na-egosi na ọdọ mmiri ahụ nọgidere na-enwe nguzo aquifer ruo afọ 200.
A kwusiri nkwụsi ike a na mberede afọ ole na ole gara aga. Ọ bụrụ na ọnọdụ nke ọkọchị ọkọchị na udu mmiri na-enweghị oke snow na-aga n'ihu, dị ka ihe atụ ihu igwe buru n'amụma, ọtụtụ ọdọ mmiri ndị na-emighị emi na-emighị emi nwere ike ịmechaa kpamkpam. O siri ike ịkọ nsogbu niile nke ọnwụ nke ebe obibi a, mana ọ bụ eziokwu na nsonaazụ nke obibi ga-adị mkpa.
Snowmelt bụ isi mmiri dị mkpa maka ọtụtụ ọdọ mmiri ndị dị n'okpuru mpaghara arctic, mana ụdị ihu igwe na-ebu amụma na ọdịda mmiri n'ụdị snow ga-ada na mpaghara ụfọdụ, yana nsonaazụ gburugburu ebe obibi dị mkpa. N'isiokwu a, a na-eji akụkụ atọ, dị ka data isotopic nke mmiri ọdọ mmiri ọnụ, gradients nke terrestrial cover cover (site na-emeghe tundra na-emechi ọhịa) na topographic enyemaka iji chọpụta ọdọ mmiri ndị na-enweghị ike ikpochapu n'okpuru ọnọdụ obere meltwater runoff na mpaghara abụọ sub-arctic - Old Crow Plains, Yukon, na Hudson Bay Shoals, Manitoba, Canada.
Ọdọ mmiri ndị dị na mmiri na-adịghị emighị emi na ọdọ mmiri ndị ọzọ na-emepe emepe na-egosi nkwụghachi ụgwọ usoro dị n'etiti ihe ngosipụta nke paleoclimatic nke ọdọ mmiri oxygen isotopes (-18O) karịrị ọtụtụ mkpọsa nyocha, ewepụtara site na cellulose dị na nkwụnye ego dị ugbu a. A na-akwụ ụgwọ a maka oke evaporation siri ike nke mejupụtara na 18O nke na-eme ihe na-erughị ka mmiri mmiri na-asọ na afọ ndị na-adịbeghị anya
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọtụtụ ọdọ mmiri bịara nso ihicha kpamkpam n'oge etiti afọ 2010, nke sochiri otu oge oyi n'oge udu mmiri n'ụdị snow. Dabere na akwụkwọ ndekọ paleoimnological nke ụdị ọdọ mmiri ndị a, ọnọdụ akọrọ akọrọ nke 2010 nwere ike ọ gaghị eme na narị afọ abụọ gara aga. Mkpebi ndị a na-enye nchegbu na mbelata nke nsụ site na snowmelt ga-eduga na mkpocha sara mbara nke ọdọ mmiri ndị na-emighị emi n'ụdị ala ndị a.
Ozi ndi ozo: WWF nwere nchegbu gbasara ọsọ na ike nke mgbanwe ihu igwe, Ice Arctic na-apụ n'anya na ọnụego ndekọ, Nchegbu na-apụ n'anya nke ice na Arctic
Fuentes: Akwụkwọ edemede Gọọmenti nke Geophysical
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Okpomoku Uwa: Uzo nke ikpochapu nke anaghi ahuta n'ime afọ 200 na ọdọ mmiri sub-arctic